Toe-tany - Wikipedia
Ny toe-tany na toetany dia ny fitambaran’ ireo zava-mitranga momba ny toetrandro mampiavaka ny toerana na ny faritra iray, izay nosalaina mandritra ny ampolotaonany maro (mahatratra 30 taona), ka isan’ izany ny sala-maripana farany ambany sy farany ambony, ny salan-kafanana ambony sy ambany, ny salan-drotsakorana farany ambony sy farany ambany, ny fizoran’ ny rivotra sy ny hafainganam-pitsokany ankapobeny, ny salam-paharetan’ ny fanazavan’ ny masoandro. Ny toe-tany dia tsy afangaro amin’ ny toetrandro, izay zava-mitranga eny amin’ ny habaka manodidina ny tany isan’ andro na mandritra ny andro vitsy.
Ny toe-tanin'ny faritra manerana izao tontolo izao.
Ny toe-tany dia ny tsinjara araka antontanisan' ny toetran' ny atmôsferan' ny tany eo amina faritra iray mandritry ny vanim-potoana iray. Haitoe-tany no anaran' ny taranja mandinika ny toe-tany. Samihafa amin' ny haitoetrandro na meteôrôlôjia ny haitoe-tany noho ity farany mandalina ny toetrandro amin' ny fotoana fohy sy amin' ny toerana voafetra.
Na amin’ ny faritra iray aza dia tsy mitovy tanteraka ny toe-tany arakaraka ny toerana heverina ao amin’ io faritra io, fa misy fiovana kely sy miandalana. Mety samy hafa noho izany ny toetany amin’ ny faritra samy hafa ao amin’ ny firenena na kôntinenta iray. Izany no mampisy karazana toetany maro eto an-tany: mangatsianka na mafana na antonony, mando na maina na antonony, sns.
Mamaritra ny toe-tany amin’ ny faritra iray ny fahazavana sy ny hafananan’ ny masoandro azon’ ilay faritra (vokatry ny tsy fitoavian’ ny zoro iantefan’ ny tana-masoandro amin’ ny toerana tsirairay eto an-tany, arakaraka ny fehin-tanin’ ilay toerana), ny fivoivoin’ ny rivotra sy ny ranomasina (izay manova ny fitsinjaran’ ny hafanana sy ny hatsiaka), ny maha akaiky na lavitra ny ranomasina ilay faritra, ary ny endriky ny vohon’ ny tany (tendrombohitra, lemaka, sns) ao amin’ io faritra io.
1 Fizaram-paritra ny tany araka ny toetany
1.1 Ny toetanim-pehiben-tany
1.2 Ny toetanin-jana-pehin-tany
1.3 Ny toetany antonony
1.4 Ny toetanin-tendron-tany
Fizaram-paritra ny tany araka ny toetanyModifier
Raha tsotsorina dia mizara faritra telo ny tany, dia ny faritra anelanelan' ny zana-pehin-tany (izay azo zaraina ho faritra manana toetanim-pehiben-tany sy toetanin-jana-pehin-tany), ny faritra antonony roa avaratry ny zana-pehin-tany avaratra sy atsimon’ ny zana-pehin-tany atsimo, ary ny faritra manodidina ny tendron-tany. Tsy ampy hamaritana ny karazan-toetany misy anefa ireo fizaràm-paritra telo ireo. Misy zana-pizaràm-paritra madinika kokoa anatin’ ireo faritra telo lehibe ireo. Ny toetanin-jana-pehin-tany, ohatra, dia azao zaraina ho toetanin-jana-pehin-tany saika karankaina, toetan-jana-pehin-tany maina na mando, sns.
Ala any Amazonia
Ny faritra misy ny toetanin-jana-pehin-tany dia eo anelanelan’ ny fehiben-tany sy ny zana-pehin-tany (zana-pehin-tany Adijady sy zana-pehin-tany Asorotany). Tokana ny fizaran-taona be orana, dia amin’ ny fahavaratra. Ambany dia ambany ny rotsak’ orana, izay tsy mihoatra ny 250 mm. Ambony dia ambony anefa ny maripana izay mety mahatratra eo anelanelan’ny 40 °C sy 50 °C amin’ ny andro, nefa amin’ ny alina dia midina izany hafanana izany ka mety mangatsiaka tokoa. Amin’ ny faritra manandrify ireo zana-pehin-tany roa dia misy ny atao hoe antisiklônina izay miteraka toetany mafana dia mafana sady maina tsy misy orana.
Tontolo manodidina hitana dongom-pasika afindrafindran' ny rivotra ao amin' ny faritry ny tany efitr' i Sahara ao atsimo-andrefan' i Libia.
Ny tany efitra mafana eto ambonin’ ny tany dia hita ao amin’ ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany, toy ny ao amin’ ny tany efitr’ i Sahara ao Afrika, ny tany efitr' i Victoria ao Aostralia.
Ny toetany antononyModifier
Tontolo manodidina ao Nuwara Eliya, any Srilanka
Ny faritra misy toetany antonony dia hita eo amin’ ireo fehin-tany salasalany. Miavaka tsara ny fizaràn-taona ka mafana ihany ny fahavaratra ary ny ririnina dia mando. Amin’ ny ankapobeny dia antonony ny hafanana sy ny hatsiaka ary ny habetsahan’ ny rotsak’ orana. Amin’ ity faritry ny toetany antonony ity no misy ny ankamaroan’ ny mponina eto ambonin’ ny tany.
Ny faritra misy ny toetanin-tendron-tany dia eo anelanelan’ ny faribolan-tendron-tany sy ny tendron-tany. Tsy dia misy firy ny rotsak’ orana ary ny maripana dia ambany dia ambany, mahalana raha hihoatra ny 0 °C. Rakotra ranomandry mandrakariva ireo faritra ireo. Rakotra ranomandry i Arktika izay ahitana an’ i Goenlandy sy i Siberia any avaratra. Toraka izany koa i Antarktika any atsimo, izay efa nahitana hatsiaka mahatratra -88 °C. Mety mahatratra 3 000 m ny hatevin’ ny ranomandry amin’ izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toe-tany&oldid=1038314"
Dernière modification le 2 Oktobra 2021, à 09:24
Voaova farany tamin'ny 2 Oktobra 2021 amin'ny 09:24 ity pejy ity.